[OFISIALY] sitrana Data avy amin'ny iOS Device - Ahoana-mba hitarika
Mahazoa nanomboka, mahazo ny tena ilaina
dr.fone Toolkit - iOS Data famerenana: Ahoana no To
Fizarana 1. sitrana Data avy amin'ny iOS Device mivantana
Fizarana 2. sitrana Data avy iTunes Backup
Fizarana 3. sitrana Data avy iCloud Backup
Dingana 1. Connect iOS Device amin'ny Computer
Hanomboka dr.fone Toolkit amin'ny solosaina. Ampiasao ny USB tariby izay azo avy amin'ny iOS fitaovana mba hifandray ny iPhone, iPad na iPod mikasika, ao amin'ny solosaina. Tsindrio eo amin'ny "Data Recovery" sy misafidy "sitrana amin'ny iOS Device" safidy.
Soso-kevitra: Alohan'ny mandeha dr.fone, ianao tokony télécharger ny farany dikan-iTunes. Mba hisorohana ny mifandrindra avy hatrany, dia aza mandefa iTunes, rehefa mandeha dr.fone Toolkit. Izaho dia manoro hevitra anao mankarary ny automatical syncing in iTunes mialoha: hanomboka iTunes> Préférences> fitaovana, jereo "prévenir iPods, iPhones, iPads avy syncing ary avy hatrany".
Dingana 2. fizahana ny Device for Very Data eo amboniny
Tsindrio fotsiny ny "Start Scan" ny bokotra aoka izany fandaharana banjino ny iPhone, iPad na iPod mikasika ny scan ho voafafa na very angona. Ny scanning h dingana mety haharitra minitra vitsivitsy, arakaraka ny habetsaky ny tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana. Nandritra ny dingana scanning, raha mahita fa ny tahirin-kevitra izay tadiavinao misy, dia afaka tsindrio ny "Pause" bokotra hampitsahatra ny dingana.
Dingana 3. Preview ny Scanned Data
Ny fizahana dia handray anareo ny fotoana. Raha vao vita izany, dia afaka mahita vokatra Notarafina niteraka ny fandaharana. Data na very, ary misy eo amin'ny fitaovana no anehoana ny sokajy. Ho voafafa hanivana ny tahirin-kevitra eo amin'ny iOS fitaovana, dia afaka swipe ny safidy "ihany no mampiseho ny zavatra voafafa" ho ON. Amin'ny fipihana ny rakitra karazana eo amin'ny lafiny ankavia, dia afaka mijery mialoha ireo antontan-kevitra hita. Ary hitanareo misy faritra voafefy eo amin'ny fikarohana ny ambony havanana amin'ny varavarankely. Afaka mitady manokana rakitra amin'ny fitendrena ny tenifototra ao amin'ny mahitsizoro fikarohana.
Dingana 4. sitrana Data avy ny iPhone / iPad / iPod mikasika
Rehefa nahita ny angon-drakitra ilainao, vao nametraka ny maso marika teo anoloan'ny boaty ny mifidy azy ireo. Rehefa avy eo, tsindrio ny "sitrana" bokotra eo amin'ny farany ambany zo ny varavarankely. Ny toerana misy anao, ny antontan-kevitra sitrana dia ho voavonjy ao amin'ny solosaina. Ary ny hafatra, iMessage, fifandraisana, na fanamarihana, rehefa tsindrio sitrana, ny Pop-up hanontany anareo mba "sitrana ny Computer" na "sitrana ny Device". Raha te-hametraka hafatra ireo indray ny iOS fitaovana, tsindrio "sitrana ny Device".
Dingana 1. Mifidiana Recovery Mode
Hanomboka dr.fone ary fidio "sitrana avy iTunes Backup File" amin'ny "Data Recovery" fitaovana. Rehefa avy eo, ny iTunes fanarenana fitaovana nomaniny ho solon'izay dia mamantatra iTunes rehetra nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy momba io solosaina ka asehoy azy tany an-baravarankely. Afaka manamafy izay misy ny olona tokony araka ny daty izany no noforonina.
Dingana 2. Scan Data avy amin'ny iTunes Backup File
Fidio ny iTunes nomaniny ho solon'izay rakitra izay ahitana ny angon-drakitra tianao ho sitrana ary tsindrio "Start Scan". Ary dia haka minitra vitsivitsy mba hanesorana ny angona avy amin'ny iTunes nomaniny ho solon'izay rakitra. Mahareta.
Dingana 3. Preview ary sitrana Data avy iTunes Backup
Taorian'ny segondra vitsivitsy, angon-drakitra rehetra ao amin'ny rakitra nomaniny ho solon'izay dia ho alaina sy aseho ao amin'ny sokajy. Azonao atao ny mijery mialoha azy ireo tsirairay alohan'ny sitrana. Avy eo ianao dia afaka fantenana marika ary sitrana izay tianao tamin'ny alalan'ny fanerena ny "sitrana" bokotra eo amin'ny farany ambany. Ary fifandraisana, sy hafatra an-tsoratra azo mivantana sitrana ny iOS fitaovana, raha mitandrina ny iOS fitaovana mifandray amin'ny alalan'ny solosaina ny USB tariby nandritra ny dingana fanarenana.
Soso-kevitra: hitanao misy boaty fikarohana ao amin'ny vokatry varavarankely. Avy eo, dia afaka manoratra amin 'ny anaran' ny antontan-taratasy mba hitady azy.
Rehefa mandeha dr.fone Toolkit, mifidy ny famerenana fomba "sitrana avy iCloud Backup Files" amin'ny "Data Recovery" tampoka tao anaty fiara. Avy eo ianao mahita ny varavarankely eto ambany. Ampidiro ny iCloud kaonty sy ny teny miafina mba Good. dr.fone maka ny fiainany manokana ho zava-dehibe. Tsy foana na oviana na oviana ny rakitsoratry ny kaonty misy ny Apple Info na afa-po na oviana na mandritra ny fotoam-pivoriana.
Dingana 2. Download iCloud Backup File
Rehefa tafiditra tao an iCloud, ny fandaharana dia afaka mahita iCloud rehetra nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy ao amin'ny tantara. Mifidiana ny iray ianao izay handeha sitrana tahirin-kevitra sy tsindrio eo amin'ny "Download" bokotra.
Ary avy eo amin'ny Pop-up, dia afaka misafidy ny karazana antontan-taratasy tianao ny misintona. Izany dia hampihena ny fotoana ny downloading ny iCloud nomaniny ho solon'izay rakitra. Ary rehefa afaka izany, dia afaka banjino ny iCloud afa-po ankehitriny. Tsindrio ny "Scan" bokotra hanombohana. Izany dia handray anareo ny fotoana. Miandry fotsiny mandritra ny fotoana fohy.
Dingana 3. Preview ary sitrana Data avy iCloud Backup File
Ny fizahana dia ho tanteraka ao anatin'ny minitra vitsy. Raha vao tsy mijanona, dia afaka maneho ankamaroan'ny angon-drakitra ao amin'ny antontan-taratasy iCloud nomaniny ho solon'izay, toy ny fifandraisana, hafatra, sary, sy ny maro hafa. Jereo azy ireo tsirairay ary mifidy ny zavatra tianao. Dia tsindrio eo amin'ny "sitrana ny Computer" na "indray ny fitaovana" bokotra mba hamonjy azy ireo eo amin'ny solosaina, na ny fitaovana iray tsindry.
Ary fifandraisana, hafatra sy fanamarihana azo mivantana sitrana ny iOS fitaovana raha ny iPhone, iPad na iPod mikasika no mifandray amin'ny solosaina amin'ny USB tariby nandritra ny dingana fanarenana.
Hametraka, Update, esory